Nayakhabar.com: दशैमा सबै प्रहरीले मासु खाएर एक रात सुते भने के हुन्छ ?
दशैमा सबै प्रहरीले मासु खाएर एक रात सुते भने के हुन्छ ?
काठमाडौं । सबैलाई चाड मनाउन भ्याइनभ्याइ छ । वर्षदिन भरिका दुःख भुलेर दसैँ मनाउन काठमाडौंलाई शून्य बनाउँदै घर फर्कनेको लर्को लागिरहेको छ । घर जान नपाएकाहरु भने काठमाडौंमा चाड कसरी मनाउने भनेर योजना बुनिरहेको छन् ।
घर गएर अथवा यही बसेर पनि चाड मनाउन पाउनेलाई त रमाइलो होला । तर तीन करोड नागरिकले राम्ररी चाड मनाउन भनेर सुरक्षामा खटिने प्रहरी भने चाडपर्व बिर्सन बाध्य छन् । नागरिकलाई चाडपर्वले छपक्कै छोप्दा प्रहरी भने नागरिककै सुरक्षार्थ खटिन्छन् । चाडमा हुने अपराध नियन्त्रण गर्न प्रहरीले यस वर्ष अघिल्लो वर्षको भन्दा एक हजार बढी प्रहरी परिचालन गरेको छ । मान्छेहरुको भीडभाड हुने स्थान, आर्थिक कारोबार हुने ठाउँ, बसपार्क लगायतका ठाउँमा प्रहरीले सुरक्षा दिन थालिसकेको छ ।
चाडमा हुने अपराध रोक्न महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले पनि योजना बनाएरै लागिपरेको छ । गोंगबु बसपार्कमा घर जान लागेकाहरु झोला बोकेर हँसिलो मुहारमा हिँडिरहँदा भने दसैँ भुलेर यात्रुकै सुरक्षार्थ खटिनुभएको छ प्रहरी निरीक्षक पूर्णिमा चन्द । यात्रुहरु ठगिने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै प्रहरी निरीक्षक पूर्णिमा चन्दको नेतृत्वमा प्रहरी खटिएको छ । बढी भाडा लिने, यात्रुलाई तानातान गर्ने, टिकट काट्दा पनि सिट नपाएमा त्यस्ता गाडीलाई ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्ने प्रहरी निरीक्षक चन्दले बताउनुभयो ।
यसरी सुरक्षार्थ खटिने प्रहरीले दसैँ कसरी मनाउलान् त ? यसबारे महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका एसपी तथा प्रवक्ता सहकुल थापा भन्नुहुन्छ, ‘चाडपर्व, मेला, महोत्सवमा सुरक्षार्थ खेटिने हाम्रो काम र कतव्र्य हो । सबै नागरिक रमाइलोमा भुलिरहँदा हामीले रमाइलोलाई बिर्सेर काम गर्नु पर्ने हुन्छ’, प्रवक्ता थापा भन्नुहुन्छ ‘अन्य नागरिक जसरी हामी पनि एक रात खसी खाएर सुत्यौं भने के हुन्छ ? तर हामी त्यो कल्पना पनि गर्न सक्दैनौं, नागरिककै सुरक्षार्थ चाड नभनी खटिन्छौं, यही नै हाम्रो चाड हो ।’
नागरिक आफन्त तथा परिवारका सदस्यसँग रमाइलो मानेर चाड मानिरहेका बेला प्रहरी भने उनीहरुकै सुरक्षार्थ खटिएका हुन्छन् । अघिपछि चाडको समयमा बढी अपराध हुने भएकाले प्रहरी पनि बढी परिचालन गर्नु पर्ने भएकाले धेरै प्रहरीहरु घर जान नपाउने प्रवक्ता थापाले बताउनुभयो ।
‘सबै नागरिकले दसैँ तिहार रमाइलोसँग मनाएजस्तै प्रहरीलाई पनि त्यसै गरी मनाउने रहर त हुन्छ, तर चाडमा अपराध बढी हुने भएकाले धेरै प्रहरी घर जान पाउँदैनन्, ब्यारेकमै रमाइलोसँग दसैँ मान्ने गरिन्छ’ प्रवक्ता थापाले भन्नुभयो ।
घर जान नपाए पनि प्रहरीले आफू डियुटीमा खटिएको ठाउँ तथा व्यारेकलाई आफ्नो घर सम्झेर दसैँ मनाउने गरेका छन् । व्यारेकमै विभिन्न कार्यक्रम गरेर दसैँ मनाउने चलन प्रहरीमा छ ।